Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ụdị ụgbọ ala egwuregwu ọhụrụ maka ihe na-erughị $30,000
N'inwe ike inyinya ọzọ na torque, ime na mputa emezigharịrị yana ọnụahịa azụmaahịa nke onye nrụpụta (MSRP) na-amalite nke naanị $27,700, 2022 GR86 ọhụrụ bụ ihe na-atọ ụtọ.
Na-abịarute na Toyota dealerships na December na dị na abụọ akara ule, GR86 na GR86 Premium, ọhụrụ ọgbọ ụgbọ ala Toyota ọkwọ ụgbọala na-eweta oké ọnụ egwuregwu ụgbọ ala fun, ha niile nwere nnukwu 2.4 lita engine na-anapụta fọrọ nke nta 18% ọzọ horsepower na 11% ọzọ torque.
Ọkwa GR86 Premium na-agba na ọkọlọtọ 18-inch, wiil aluminom alloy ojii 10 na-ekwu okwu ya na taya Michelin Pilot Sport 4® yana nnukwu ihe nbibi ọbọgwụ na azụ. N'ime, nwa na ọlaọcha accented isii ụzọ mgbanwe n'ihu oche atụmatụ abụọ-larịị kpo oku na perforated UltraSuede upholstery na akpụkpọ anụ n'akụkụ bolsters. Asụsụ ojii na ọlaọcha na-aga n'ihu ruo n'ụgbọ ụkwụ akpụkpọ anụ, akpụkpọ ụkwụ mgbanwe na breeki aka. Sistemụ mgbasa ozi mmetụ ihuenyo inch 8 ọhụrụ nwere ndị na-ekwu okwu asatọ na-eweta njikọta na ụda na ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Ọkwa GR86 na-anọdụ na inch iri na asaa, wiil aluminom alloy a na-ekwu okwu 17 ejiri kechie na taya Michelin Primacy HP®. Ngosipụta dị n'ime ụlọ gụnyere akwa ojii G-embossed nwere ụzọ isii nwere ike ime nke nwere akụkụ akwa egwuregwu nwere vinyl textured na akwa akwa egwuregwu na dash, ọnụ ụzọ na steering wheel. Usoro mgbasa ozi mmetụ ihuenyo 10 ọhụrụ nke nwere igwe okwu isii na-abịa ọkọlọtọ.
Dị na nhọrọ nke akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ paddle gbanwere nnyefe akpaaka, ọ na-abịa na nhọrọ nke agba mpụga asaa: Track bRED, Halo White, Silver Silver, Pavement Gray, Raven Black na Neptune ma ọ bụ Trueno Blue. Ọgbọ ọhụrụ a na-egosikwa mgbanwe ya na Gazoo Racing lineup nwere akara ọhụrụ GR86 angular jikọtara ya na baajị GR Toyota. A na-atụ anya na ụdị ga-abata n'ụlọ ahịa Toyota na Disemba a.